Sla-brilliant Reflective Glasses ho an'ny Paint Traffic China Manufacturer
Description:Sla Glass Glass S refleir,S-Brilliance Reflective Micro Glass Beads,Ny mikrôpiana mikarantsara mikarantsana mikarantsana
Home > Products > Sela Brilliant Glass > Sla-brilliant Reflective Glasses ho an&#39;ny Paint Traffic
Ho an'ny kôlôjia mba hamerenana ny hazavana, dia ilaina ny toetra roa: mangarahara ary ny manodidina. Chiye Beads vita tamin'ny fitaratra dia samy manana ireo toetra ireo. Ny fahamendrehana sy ny fihenan-toerana dia azo raisina ho manan-danja raha manaraka ny làlan'ny hazavana ianao rehefa miditra ao amin'ny kofehy voarakitra anaty marika fampiharana. Tsy maintsy mangarahara ny jiro fitaratra mba hahafahan'ny fahazavana miditra sy ivelan'ny sehatra. Rehefa miditra ao amin'ny kofehy ny ranjon'ilay hazavana, dia atambatra ny elanelany amin'ny rindrina eo amin'ny teboka etsy ambany, izay napetraka ao amin'ny loko na PMM. Ny hazavana mamely ny ambim-bavon'ny loko boribory dia hita taratra amin'ny loko, amin'ny ampahany kely amin'ny hazavana miverina mankany amin'ny loharano manaitra.
Sla Glass Glass S refleir S-Brilliance Reflective Micro Glass Beads Ny mikrôpiana mikarantsara mikarantsana mikarantsana Fiara Glass Glass Premix Perla Glass Glass Perila Glass Glass Standard Brilliance Glass Glass Reflective Screen Be Glass Glasses